Iwo akanyanya kutyisa mabhuku, mubatanidzwa wenyaya dzakasviba nyaya | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaura nezve akanakisa mabhuku anotyisa kunogona kunge kuri kwekunyepedzera, kunyanya nekuda kwekuremerwa kwakakura kunoitwa nekambani iyi pachayo. Nekudaro, kururamisira kuchatsvakwa zvichibva pabasa revakuru. Ikozvino, kutyisa inyaya yekunyepedzera rondedzero subgenre iyo yakazove inozivikanwa zvikuru mushure merudo. Aya mamiriro akakonzerwa netarisiro diki inokurudzira yemabhuku chaiwo mukati mezana ramakore rechiXNUMX. Ehe, dzaive nguva dzekuchinja kwemaindasitiri, pamwe neiyo genesis yeiyo isingadzorwi capitalism. Mhinduro yehunyanzvi yakaunza kuzvarwa patsva kwekufungidzira, kuzviisa pasi uye kushamwaridzana.
Mukati meizvi zvazvino, zvinyoreso zvekusavimbika zvakaonekwa saMary Shelley, Edgar Allan Poe kana Bram Stoker, pakati pevamwe vazhinji. Vanyori vatatu ava vakasarudza kunyatso pinda munzvimbo dzine mweya. Sarudzo yake yakaguma nekugadzirwa kwenyika dzerima dzese dzakambofungidzirwa nepfungwa dzemunhu. Munzvimbo dzakasuruvara idzi vamwe vevanhu vakakurumbira kusvika nhasi vakabuda.
1 Ndeapi hunhu ane akanyanya kutyisa mabhuku ane?
1.1 "Kukwanisika" kwemweya unoshamisa
1.2 Rima mhepo
1.3 Misoro ine chekuita nehunhu hwevanhu
2 Iwo makuru echinyakare eanotyisa mabhuku
2.1 Frankenstein kana Yemazuva Ano Prometheus (1818), naMary Shelley
2.2 Iyo Nhema Katsi (1843), naEdgar Allan Poe
2.3 Dracula (1897), naBram Stoker
3 Unofanira-ona anotyisa mabhuku kubva muhafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX
3.1 Kubvunzana naVampire (1976), naAnn Rice
3.2 Nhamo (1987), naStephen King
Ndeapi hunhu ane akanyanya kutyisa mabhuku ane?
Sezvazvakataurwa, Kugadzira runyorwa rwe "mabhuku akanakisa e…" iwo, pachawo, mubvunzo unozvitongesa uye unotodada. Nekudaro, iwo mazita ekuremekedzwa zvikuru neruzhinji nevatsoropodzi mukati meanotyisa marudzi ane hunhu hwakajairika hwakavaita mabasa asingafi. Pakati peavo:
"Kukwanisika" kwemweya unoshamisa
Iyo rondedzero tambo uye zviwanikwa zvinoshandiswa nevazhinji vanotyisa vanyori zvinogadzira shanduko yemafungiro muverengi. Sezvinei, zvemweya - zvisinei nekufungidzira - zvinopedzisira zvave "kugutsa" muverengi nezvechokwadi chavo kuburikidza nesainzi fungidziro inomira.
Iyo Gothic kana yeVictorian sisitimu yakakosha yekumutsa manzwiro uye kukochekera muoni. Ndiani anowanzo shandurwa kuita wepamberi chapupu uye, kunyangwe, mubatsiri wezviitiko zvinorondedzerwa. Ndichiri munyaya dzakadai KusuwanaStephen King, mamiriro asiri eGothic kana Victorian per se, protagonist (munyori) anoshandisa nharaunda idzi mumagwaro ake.
Misoro ine chekuita nehunhu hwevanhu
Mavara ari mumabhuku anotyisa akanakisa - kunyangwe angave anotyisa sei pakutanga - anogara aine vavariro dzevanhu chaidzo. Naizvozvo, muverengi anogona kusvika pakunzwa kunzwira tsitsi kune avo vanotaura. Mumwe wemienzaniso yakakosha ndeyechikara chaFrankenstein, icho chinoreva kuremekedza hupenyu uye kuratidza pane nyaya dzakadai sekusurukirwa kana hunhu hwesainzi.
Saizvozvo, mu Dracula Bram Stoker (munyori) anoongorora nyaya dzine chekuita nezvebonde, basa revakadzi mukati mevanhu veVictorian, uye ngano. Ipapo, mavara anobatwa nenzira iyo kuvapo kwavo kusingaiti "muhupenyu chaihwo." Imomo mune nhema dzevanyori vakakura veiyo genre: kuita kuti vaverengi vanzwe kuti zvemweya unoshamisa "uri pakati pedu."
Iwo makuru echinyakare eanotyisa mabhuku
Frankenstein kana iye ano Prometheus (1818), naMary Shelley
Unogona kutenga bhuku pano: Frankenstein
Munguva ye1880s, hunyorwa hwa Mary shelley (1797 - 1851) nezvaFrankenstein akabvunzwa. Sezvo zvaiwanzoitika pamberi pezana ramakore rechimakumi maviri, murume wake Percy B. Shelley (1792 - 1822) akasvika padhuze nekuwana chikwereti. Kunyangwe parizvino pasina kana kusahadzika nezvazvo, ichiri fungidziro isina kunaka kune mukadzi anga ari nyanzvi yekunyora.
Zvakanaka Akakumikidza chikamu chakakura chemashoko ake mukugadzirisa nekusimudzira basa remurume wake, Kunze kwekupedzisa mamwe mabasa anozivikanwa. Pakati pavo, Valperga (1823) uye Munhu wekupedzisira (1828). Ehezve, rake rakakosha bhuku raive iro raitarisa "chisikwa" (Frankenstein) nekuti inofungidzirwa - hapana chimwe uye hapana chakaderera - yekutanga sainzi ngano zita munhoroondo yese.
Víctor Frankenstein musayendisiti wechidiki anoda ruzivo, ane vavariro yakanyanyisa inomutungamira kupfuura chero mutsika nehunhu.. Kusvika padanho rekuti iye ane hanya nekugadzira hupenyu kubva kumuviri akafa. Nechinangwa ichi, isa pamwe zvikamu zvakasiyana zvezvitunha zvakasiyana kuti ugadzire chikara chinotyisa chemamita 2,44 pakukwirira, chakamutswa kubva pasimba remagetsi.
Kubudirira kwesainzi kunopedzisira kwave kutukwa kwake. Zvakanaka Zvisikwa zvake zvinorambwa nevanhu vese vaanowana munzira yake. Nekudaro, iyo hombe chisikwa inotanga kuuraya wese munhu padhuze naVictor. Mumwe chete ndiye anokwanisa kudzikamisa chikara, asi musayendisiti anoramba uye anogumisa chero mukana wekuguma murunyararo.
Munyori anotanga nekuzviti haasi kupenga. Kunyangwe achinzwa padhuze kufa musi iwoyo nekuti anoda kunyaradza mweya wake nekuda kwezviito zvinotyisa uye zvinoparadza zvakatambudzwa. Kuti azvitsanangure, anotanga kurondedzera zviitiko izvi zvisina kunyatsorongeka. Inotanga nerondedzero yake semwana akanaka uye ane moyo kumhuka, kunyanya katsi nhema inonzi Pluto.
Zvichida, iyo feline ingadai yakave mota yechinhu chedhimoni. Saka, protagonist anokudziridza "chirwere" chinomukonzeresa kuti azvibate zvisirizvo uye nehasha (anorova mukadzi wake, anokwenya ziso rekatsi nechisvo, anobva adhakwa) ... Pakupedzisira, murume uyu anorasikirwa nezvose uye mukadzi wake paakatora imwe kati nhema, protagonist "anorwara" zvakare.
Unogona kutenga bhuku pano: Dracula
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti munyori aive akavakirwa pazvakakurumbira ngano uye ngano dzakabatana nemampires kubva kuEastern Europe Epistolary murondedzero webhuku mutengesi Jonathan Harker, uyo anotorwa nehana yekuverenga Dracula apo ndichiita bhizinesi mudunhu reTransylvania.
Gare gare, iyo nzeve inosvika muLondon nechinangwa chekudzima nyota yaro yeropa uye nekuwedzera dzimba dzevakadzi. Iko, anokudzwa Lucy Westenra awira mukushamisika kusinganzwisisike uye ane maviri mamaki ezvidiki zvidiki pamutsipa wake. Nechikonzero ichi, chiremba wake (Seward) anokumbira rutsigiro rweMukurumbira Professor Van Helsing, nyanzvi mune zvisingawanzo mamiriro. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, kurwira kweropa kunoitwa pakati pezvakanaka nezvakaipa izvo zvinogona kuyedza kutsunga kwevose vanobatanidzwa.
Unofanira-ona anotyisa mabhuku kubva muhafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX
Kubvunzana nevampire (1976), rakanyorwa naAnn Rice
Unogona kutenga bhuku pano: Kubvunzana nevampire
Iri zita rekutanga mune akateedzana Iyo Vampire Diaries rakanyorwa naAnn Rice. Inotaurira nezvekushandurwa kwejaya risina kunaka kubva kuNew Orleans kuenda mukutongerwa rima risingaperi. Uku kusafa kunoperekedzwa nekudemba kwe protagonist nekuda kwekufa kwese kwaakaita uye nerudo rwaakanzwa kune mumwe weavo vakaurayiwa.
Kusuwa (1987), naStephen King
Unogona kutenga bhuku pano: Kusuwa
Chete "tenzi wekutyisa" ndiye aigona kugadzira yakadaro yakamonyoroka uye yekunyanyisa ngano. Iye protagonist munyori anonetsekana netsaona uye ari pasi pechiremba mukoti ane hunhu hunoshamisa (anogara kure kure kabhini). Asi muchokwadi, iye macabre pfungwa, saka, munyori anofanirwa kutiza nekurwira hupenyu hwake kunyangwe kana makumbo ake akavhunika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » Mabhuku anotyisa kwazvo